Kooxda Barcelona oo bar-baro la dhaafi weyday kooxda yar ee SD Huesca +Sawiro – Gool FM
Kooxda Barcelona oo bar-baro la dhaafi weyday kooxda yar ee SD Huesca +Sawiro
( Spain) 13-Abriil 2019 kulan ciyaareedkii u dhexeeyey kooxaha SD Huesca iyo Barcelona ayaa ku dhamaadat bar-baro gool la’an ah waxaana xusid mudan in talaadada ay garoonkooda ku soo dhaweenayaan Kooxda Manchester United.
Qeebtii koowaad ee kulan ciyareedka u dhaxeeyey Kooxaha SD Huesca iyo Barcelona ayaa ku dhamaaday bar-baro gool la’aan ah wallow Kooxda Barcelona ay soo bandhigatay ciyaar aad loo jecleesto.
Kooxda martida loo ahaa ee SD Huesca ayaan wax isku day oo gool loo filan karo sameenin qeebtii hore ee ciyaarta wallow ay sameeyeen shan shuut oo banaanka aaday.
Dhica kale Kooxda Barcelo ayaa sameesay labo isku day oo gool loo filan karay balse uma suura galin in ay gool u badalaan jaanisyadaas oo ay heleen.
Ugu dameeb xaakimkii ciyaarta ayaa ku dhaawaqay seeriga waxaana lagu kala nastay bar baro goolal la’aan, nasiino kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid ka xiiso badan qeebtii hore.
Kooxda Barcelona ayaa sameesay fursado cajiib ah qeebtii dambe ee ciyaarta si ay helaan goolka kowaad ee kulanka balse Kooxda SD Huesca ayaa sameesay difaacasho qurux badan.
Ugu dambeen kulan ciyaareedka ayaa ku dhamaaday bar-baro gool la’an ah,wollow Kooxda Barcelona ay ka maqnaayeen ciyaartoy muhiim ah.